तपाईंको भोजन कक्ष उज्यालो गर्न तीन प्रकारका बत्तीहरू | बेजिया
मारिया vazquez | 09/05/2022 20:00 | ट्रिक्स सजावट
के तपाइँ तपाइँको भोजन कोठा कसरी उज्यालो गर्ने थाहा छैन? त्यहाँ धेरै प्रकारका बत्तीहरू छन् जुन तपाईंले डाइनिङ टेबलमा प्रत्यक्ष प्रकाश प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यस कारणले गर्दा निर्णय लिनु भारी हुन सक्छ। तपाईंको लागि सजिलो बनाउनको लागि, बेजियामा हामी आज तपाईंसँग तीन प्रकारका बत्तीहरू साझा गर्दैछौं जसको साथ तपाईं गलत हुन सक्नुहुन्न।
तपाईंको भोजन कक्षलाई उज्यालो बनाउनको लागि त्यहाँ तीन प्रकारका छत बत्तीहरू छन् जसको साथ यसलाई सही गर्न गाह्रो छैन र ती सबैले एउटा विशेषता साझा गर्छन्: तिनीहरू पेन्डेन्ट हुन्। एउटा वा अर्को छनोट गर्नु भनेको तपाईंले भोजन कक्ष जस्ता पारिवारिक ठाउँ सजाउन खोज्नु भएको शैलीमा निर्भर हुनेछ।
किन लटकन? किनभने हामी उज्यालोलाई टेबलको नजिक ल्याउन खोज्छौं ताकि यो उज्यालो होस्। यो सोच्नु काल्पनिक हो कि धेरैजसो घरहरूमा तिनीहरू हामीले तपाईंलाई देखाउने छविहरूमा जति झुण्ड्याउन सक्षम हुनेछन्। हामीमध्ये धेरैजसोसँग त्यस्तो उच्च छत छैन। यसको अतिरिक्त, टेबलबाट बत्तीमा एक निश्चित दूरीको सम्मान गर्न आवश्यक छ ताकि तिनीहरू हस्तक्षेप गर्दैनन् किनकि यो तेस्रो छविको साथ हुनेछ जस्तो देखिन्छ।
1 हतियार संग बत्ती
2 औद्योगिक-प्रेरित लटकन बत्तीहरू
3 एक महान प्राकृतिक बत्ती
हतियार संग बत्ती
La बहु-आर्म बत्तीहरू तिनीहरू भोजन कक्षलाई उज्यालो बनाउनको लागि उत्कृष्ट विकल्प हुन्। सामान्यतया यी केन्द्रीय अक्षबाट बनेका हुन्छन् जसबाट हतियारहरू विभिन्न दिशाहरूमा जान्छन् ताकि तालिकाको कुनै पनि कुनालाई उज्यालो नहोस्।
तिनीहरू धेरै व्यक्तित्व भएका बत्तीहरू हुन् र भोजन कक्षमा सामान्य प्रकाश र फोकल प्रकाशको बीचमा एक आदर्श संयोजन प्राप्त गर्नका लागि आदर्श हुन्। ती अभिव्यक्त हतियार संग तिनीहरूले तपाईंलाई अलमारी जस्ता अन्य फर्निचरहरू पनि उज्यालो गर्न अनुमति दिनेछन्।
बेजियामा हामीले तिनीहरूलाई सबै प्रकारका भोजन कक्षहरू सजाउनको लागि उत्कृष्ट प्रस्ताव पाएका छौं। र यो हो कि द बत्तीहरूको ठूलो विविधता यस प्रकारले तिनीहरूलाई धेरै फरक ठाउँहरूमा अनुकूलन गर्न सम्भव बनाउँछ। तपाईंले तिनीहरूलाई टेक्सटाइल स्क्रिनहरू फेला पार्नुहुनेछ, भोजन कक्षमा परम्परागत स्पर्श थप्नको लागि आदर्श; यसलाई थप क्लासिक शैली दिन गिलास ट्यूलिप संग; या त बेलुन शैली वर्तमान र आधुनिक वातावरण प्राप्त गर्न।
बैठक कोठा उज्यालो बनाउन ग्लास ग्लोब ल्याम्पहरूमा शर्त लगाउनुहोस्
औद्योगिक-प्रेरित लटकन बत्तीहरू
जबदेखि औद्योगिक-शैलीको लटकन बत्तीहरूले सजावटको संसारमा आफ्नो प्रमुखता पुन: प्राप्त गरे, तिनीहरू भान्साको टापु र भोजन कक्षको टेबल दुवै प्रकाशको लागि उत्कृष्ट विकल्प हुन जारी राखेका छन्। र यी ठाउँहरूमा यसको लागि औद्योगिक शैली हुनु हुँदैन।
यद्यपि तिनीहरूको ठूलो आकारको कारणले भोजन कक्षलाई उज्यालो बनाउन यी बत्तीहरू मध्ये एउटा मात्र प्रयोग गर्न सम्भव छ, तिनीहरू विरलै एक्लै पाइन्छ। द दुई वा तीन बत्तीहरूको समूह तिनीहरू आयताकार तालिकाहरूमा अधिक सामान्य छन् र तिनीहरूसँग ठूलो सजावटी शक्ति पनि छ।
यी बत्तीहरू सामान्यतया प्रस्तुत गरिन्छ धातु वा म्याट फिनिश। पछिल्लो रङहरू जस्तै कालो, खैरो वा ढु stone्गाको रंगहरू हाल देहाती र आधुनिक भोजन कक्षहरू सजाउनको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय छन्।
एक महान प्राकृतिक बत्ती
प्राकृतिक सामग्रीले सधैं हाम्रो घरमा न्यानोपन थप्छ। बिरुवा फाइबर तिनीहरू हाल भित्री डिजाइनमा एक प्रवृत्ति हो, त्यसैले किन तिनीहरूलाई भोजन कक्षको डिजाइनमा समावेश नगर्ने? हामी यसलाई कुर्सीहरू मार्फत गर्न सक्छौं, तर टेबलमा ठूलो केन्द्रीय बत्ती राखेर पनि। के तपाईंलाई लाग्दैन कि तिनीहरू विशेष गरी सानो गोलो वा आयताकार तालिकाहरूमा राम्रो देखिन्छन्?
यी बत्तीहरूले कोठामा धेरै न्यानो प्रकाश मात्र प्रदान गर्दैन तर तिनीहरूको ब्रेडेड डिजाइनको लागि धन्यवाद प्रतिबिम्बित गर्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ। भित्तामा राम्रो ढाँचाहरू। के तपाईको छत उच्च छ? घण्टी-प्रकारको बत्तीको साथ हिम्मत गर्नुहोस्। यदि, अर्कोतर्फ, छत विशेष गरी उच्च छैन भने, थप गोलाकार र सपाट डिजाइनको लागि रोज्नुहोस्।
यी धेरै प्रकारका बत्तीहरू मध्ये तीन मात्र हुन् जुन तपाईंले आफ्नो भोजन कक्षलाई उज्यालो बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै समायोजन गर्न सकिन्छ, सही डिजाइन छनोट गरेर, तपाइँको भोजन कोठामा तर तपाइँ मात्र निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कुन रोज्ने हो। तालिकाको आकार र यसको आकार, साथै कोठाको शैलीको मूल्याङ्कन गर्दै, हामी निश्चित छौं कि तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ। सहि छान्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले तपाईलाई कुन मन पर्छ? तपाईं आफ्नो भोजन कक्ष कुनसँग सजाउन चाहनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » ट्रिक्स सजावट » तपाईंको भोजन कक्ष उज्यालो गर्न तीन प्रकारका बत्तीहरू
Gastroesophageal रिफ्लक्स, तपाईंले कुन खानाहरू बेवास्ता गर्नुपर्छ